Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Crowne Plaza Hotels & Resorts dia namoaka hotely enina voalohany any Etazonia, Eropa ary Sina
Crowne Plaza Hotels & Resorts manambara ny fisokafan'ny trano fandraisam-bahiny miisa enina any Etazonia, Eropa ary Shina amin'ny fiandohan'ny taona 2020. Ireo fanilo ireo amin'ny marika Crowne Plaza dia maneho ny famolavolana ny fanavaozana ny famolavolana marika vaovao sy ny fenitra farany farany an'ny marika manerana ny habakabaka, efitrano fandraisam-bahiny, F & B, teknolojia, serivisy sy maro hafa.
Ireo fananana ireo dia mampiseho ny famerenana amin'ny laoniny ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra eto an-tany ary ny fanoloran-tena mitohy sy ny fampiasam-bola avy amin'ny IHG (InterContinental Hotels Group) amin'ny fananganana ny safidin'ny indostria ho an'ny fijanonana kilasy fandraharahana. Ny sainam-pirenen'i Crowne Plaza vaovao any Amerika, Crowne Plaza Atlanta Perimeter ao Ravinia dia nisokatra tamin'ny volana aprily 2019 taorian'ny fanovana tanteraka, raha toa ka misy ny fanokafana sy fanamboarana an-tsokosoko any Paris, Hamburg, ary London hampiditra vanim-potoana vaovao ho an'ny Crowne Plaza any Eropa. Toeram-pananahana roa fanampiny no kasaina hisokatra any Sina amin'ny faran'ny 2019: Crowne Plaza Shenzhen Nanshan sy Crowne Plaza Wuzhen.
Eric Lent, filoha lefitra zokiny, Global Marketing, Upscale Brands ao amin'ny IHG dia naneho hevitra hoe: "Avy amin'ireo ivon-toeram-pivarotana eto afovoan-tanàna ka hatrany amin'ny hotely seranam-piaramanidina tsara indrindra, Crowne Plaza dia manavao ny fivezivezena amin'ny asa aman-draharaha sy ny fialam-boly. Ireny fisokafana ireny dia dingana iray lehibe mankany amin'ny tanjontsika mba ho safidy voalohany sy maharitra hijanonan'ny hotely ambony manerantany. ”
Ny fananana isam-boninahitra tsirairay dia misy endrika vaovao ho an'ny habakabaka sy ny efitrano fandraisam-bahiny izay aingam-panahy avy amin'ny fangatahan'ny vahiny mitaky habaka malefaka. Ny famolavolana sy ny efitrano fandraisam-bahiny dia ahitana faritra miavaka mifangaro amin'ny haitao, manome hery ny vahiny sy ny mponina miaraka amin'ny fahaizana miasa mahomby sy miala sasatra amin'ny fe-potoana nomeny. Ny fananana tombam-bidy voafantina dia hanasongadinana ireo faritra malalaky ny lobby misy ny efitrano fivoriana on-demand, izay noforonina araka ny marika hitan'ireo vahiny fa mila fahafaha-misaina bebe kokoa rehefa manao raharaha na mifindra amin'ny fotoana tsy ampoizina.
Libby Escolme, filoha lefitra, Crowne Plaza, dia naneho hevitra hoe: “IHG dia manohy mampiasa vola be ary manavao ny fivoaran'ny portfolio Crowne Plaza. Ny fantsonay dia matanjaka noho ny hatramin'izay, ary ny sainam-pirenena vaovao miisa enina dia hametraka ny fenitra ho an'ny ho avin'ny marika. Tsy afaka miandry ny fandraisana ireo mpitsangatsangana sy mpivahiny miala voly eran'izao tontolo izao izahay hiaina ny endrika vaovao an'ny Crowne Plaza. ”
Tany Eropa, ny IHG dia niara-niasa tamin'ny studio famolavolana Conran + Partners hanohitra ny fiheverana mialoha ny trano fandraisam-bahiny mahazatra sy hamorona toerana manentana sy azo ampiharina kokoa.
Crowne Plaza Paris Republique dia manamarika ny famoahana voalohany ny fahitana vaovao vaovao sy feno fahasahiana ho an'ny marika any Eropa. Raha mitazona ny endrika mampiavaka azy amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, ny hotely dia hanolotra toerana maoderina maivana ao an-tranony. Manam-pahaizana momba ny fivarotana hotely no manangona zavakanto avy amin'ireo mpanakanto eo an-toerana hanatsara ny fomba famolavolana ankapobeny. Ny famolavolana vaovao manaitra izao dia vita amin'ny famaranana ho an'ny vahiny voalohany hankafizin'izy ireo raha mitohy ny fanavaozana.
Crowne Plaza Hamburg - City Alster dia hanomboka traikefa vaovao sy malefaka amin'ny volana oktobra ary izy no voalohany Crowne Plaza Flagship any Eropa izay manolotra efitrano fandraisam-bahin misy sonia misy toerana malalaka hiasana, hialana sasatra ary hatoriana. Ireo efitrano dia hanolotra fahatsapana habaka sy ergonomika nohatsaraina miaraka amina endrika am-piheverana, ary koa torimaso tsara kokoa amin'ny alim-baravarana miaraka amin'ny akustika nohatsaraina sy ny fandrakofana nohatsaraina.
Crowne Plaza London - Heathrow dia hanamboatra fanavaozana lehibe ary hisokatra indray ho toy ny sainam-pirenena vaovao amin'ny fiandohan'ny taona 2020. Hanasongadina endrika vaovao tsara ity trano fandraisam-bahiny ity miaraka amin'ny trano fisakafoanana ambony sy toerana malalaka hihaonana.
Nalefa tamin'ny 2016, ny programa Crowne Plaza Accelerate dia manohy manatsara ny fanatsarana ny traikefan'ny vahiny amin'ny ankapobeny any Amerika. Tamin'ny faran'ny volana Mey, nandefa ny dingana an-taonany maro amin'ny programa antsoina hoe Accelerate Ahead ny IHG. Ity programa ity dia mikasika ny lafiny rehetra amin'ny marika, ao anatin'izany ny: varotra, marketing, endrika, F & B ary serivisy; fampandehanana fiara ary fanatsarana ny kalitao sy ny tsy fitoviana. Accelerate Ahead dia manohy mifantoka amin'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny varotra ary manandratra ny traikefan'ny vahiny, miaraka amin'ny fanekena iraisan'ny IHG sy ny tompona hotely ary ny mpandraharaha.
Mampiseho ny singa rehetra amin'ny programa Accelerate, ny Crowne Plaza Atlanta Perimeter ao Ravinia dia nahavita ny fiovany tamin'ny volana aprily 2019 taorian'ny fanidiana sy fanamboarana sivy volana. Nisokatra indray ny trano fandraisam-bahiny misy 495 ny sonia sy efitrano fandraisam-bahiny WorkLife misy patanty; trano fisakafoanana telo natao miaraka amin'ny Kimpton Hotels & Resorts, marika IHG iray hafa izay mifantoka amin'ny fanomezana trano fisakafoanana sy fisotroana miavaka; ary koa misy efitrano fivoriana 32,000 metatra toradroa. Ny vahaolana ao amin'ny lobby mora azo Plaza Workspace dia tafiditra tsara ao amin'ny faritra iraisana, miaraka amina vahaolana hiasa sy fihaonana isan-karazany ao anatin'izany ny Studios roa azo vakina isaky ny ora.
CHINA LEHIBE INDRINDRA
Crowne Plaza Shenzhen WECC dia ho trano fandraisam-bahiny mandroso amina endrika akaikin'ny seranam-piaramanidina Shenzhen Boa'an Int'l ary akaikin'ny Shenzhen World Exhibition & Convention Center, izay ho ivon-toeran'ny fivoriambe lehibe indrindra manerantany. Ity trano fandraisam-bahiny ity ihany koa no ho Crowne Plaza voalohany any Greater China mampihatra famolavolana efitrano fandraisam-bahiny vaovao sy toerana malalaka handefasana traikefa ananan'ny vahiny. Ny trano dia hanana efitrano fivoriana 1,400 metatra toradroa misy efitrano fivoriana 5, ao anatin'izany ny efitrano malalaky ny efitrano izay hipetrahan'ny olona 500.
Crowne Plaza Wuzhen dia hanolotra habaka hetsika miovaova 216 metatra toradroa ao amin'ny efitrano fivoriana telo, ary efitrano fanaovana fanasana 500 metatra toradroa hafa izay mahazaka olona vahiny 260. Ny trano fandraisam-bahiny vaovao dia ho hita eo akaikin'ny seranam-piaramanidin'i Hangzhou Int'l ary akaiky ny tanàna malaza amin'ny rano any Wuzhen West Scenic Zone, World Internet Conference Center ary hanasongadina ny trano fisakafoanana feno fanompoana, CAI FENG LOU, ary Tong Café mandritra ny andro. fisakafoana.
Tamin'ny faran'ny volana martsa 2019 dia nisy trano 427 Crowne Plaza ary efitrano 120,000 manerantany.